အိုဆိုရဲဇန်း အုဆိုရိခို ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
အိုဆိုရဲဇန်း၏ ချိုင့်ဝှမ်းတွင်ရှိသော မီးတောင်ပေါက်ဝရေကန်။ ပြင်ထန်သောအက်ဆစ်ဓာတ်ရှိပြီး အစိမ်းရောင်ရေကန်တွင် ရှင်သန်နေကြသော သက်ရှိသတ္တဝါများသည် အက်ဆစ်ဓာတ်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ငါးအမျိုးအစားဖြစ်သည့် အုဂုအိတစ်မျိုးတည်းသာဖြစ်ပါသည်။ ရေကန်တစ်ဝိုက်တွင် အဖြူရောင်သဲလွင်ပြင်များရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာပြီး ပျော်စရာကောင်းသော ကမ်းခြေဟု ဆိုကြပါသည်။
Aomori ken Mutsu-shi
အရှေ့ မြောက်တွင် သရဲကမ္ဘာနှင့်ဝိညာဉ် ကမ္ဘာ၏ နယ်နိမိတ်ဟုဆိုကြပါသည်။ (ဆန်းဇုနော့ဂဝ) ကစီးဆင်းနေပြီး ဟင်္သာပြဒါးရောင်ဆေးချယ်ထားပြီး တိုင်းအိခိုဘရှိတံတားလည်း ရှိပါသည်။
JR (Shimokita ဘူတာ) မှ osorezanလိုင်းကို စီးပါ ၄၀ မိနစ်ခန့် တွင်ဆိုက်ရောက်ပါမည်။
အိုအိုဂတမြစ်အပေါ်ပိုင်း၏ ယဂန်းတောင်ကြားသည် ရေတံခွ...
အပြာနှစ်ရောင်ရှိတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ပုံစံရှိတဲ့ကျောက်...
နာနော့ဟနပွင့်သောဧရိယာအားဖြင့် ဂျပန်တွင် ပထမဆုံြး...
ဖောင်းကားနေသောဗိုက်နှင့် ခြေထောက်တုတ်တုတ်။ ဂျပန်...
( လူသားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှ ရောဂါ၊ အရက် စတဲ့ မကောင်းတဲ့ ကြမ္မာတွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ ! ) မကောင်းတာတွေ ဖြတ်တောက်ပေးမယ့် နေရာ ၉ နေရာ
( ပေါင်းစည်းခြင်း ) က နာမည်ကြီးပေမယ့် ( ကွဲကွာခြင်း ) တွေလည်း ရရှိတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကို သိကြတယ်မဟုတ်လား ? ပေါင်းစည်းချင်တဲ့ ကံကြမ္မာရှိသလို ကွဲကွာချင်တဲ့ကံကြမ္မာလည်း ရှိပါတယ်။ လူသားဆိုတဲ့ အရာဖြစ်ပါတ...